Taariikhda My Butros » Waa maxay sababta aan Waxaad isku daydaa inaad badashid Guy
Waxaa jira wax badan oo qoraal ah oo ku saabsan sida aad ka bedeli kartaa nin. Sidee baad isaga rabbayn karo oo isaga ka dhigi doonaa ninka aad rabto inaad isaga u noqon. Laakiin ha noqon daacad halkan, waxa mar kasta ku qoran wadahadalo ee hadda jira iyo muuqataa in ay ekaanta badan ee ay sababeyso muddada dheer ee falalka noocaas ah. Runta waxa ay tahay in aad rabto in aad beddesho oo keli ah nin maxaa yeelay, isagu waa xaq aad u.
Marka aad u jeclahay ama runtii nin aanad rabin in ay ku badasho. Xataa waxyaabo aad u neceb isaga ku saabsan waxaad Khayrja isaga ku saabsan sababtoo ah waxa ay yihiin xubno in isaga ka dhigi cidda uu yahay. Waxaa intaa dheer in ka-muddo dheer ay ku dhamaan doonaa inaad resenting haddii aad iyaga u beddeli. Oo waa inaad iyaga eedayn karo? Ma jeclaan lahayd inaad qof aad beddelo wiilasha iyo axadda? Deep hoos u dhib ma leh in aan nahay kuwa aadan doonayn jacaylka qalbi-. Jacaylka waa in degaya kaliya ee nin oo aan xaq noo. Iyo dadkii la heli noocan oo kale ah mid cajiib ah (Dabcan cilladaysan laakiin Xiriir kasta wuxuu leeyahay daqiiqado) jeclahay meesha aad noqon kartaa lacag la'aan ah, faraxsan, aamin ah oo cilmi ah in uu aad u jecel yahay, waayo, waxaad tahay geesi. Waxay isku dayin aadan in la beddelo nin ugu horeysay ee ay ku kulmaan galay qof uusan ahayn. Waxay sugi oo ay ka heli qofkaasi cidda ay dunida ka badala oo aan u baahnayn in ay is beddesho.
Jacaylku waa Ixtiraamka. Waxaad u baahan tahay inaad ku riday waxa aad ka filan inay ka soo Baxaan. Sidaas darteed haddii aadan rabin inay ku bedesho markeeda waa in aad u muujiso ixtiraam ma in isaga bedeli. Ka sokow haddii aad si dhab ah isaga jecel fikradda ah beddelo qayb kasta oo isaga kama gudbi maskaxdaada. Ma dhahayo in aadan ka heli doontaa la Wadaage nolol-dheer adigoo isticmaalaya yareeynta oo dhan / beddelo hab laakiin ma waxaad ka heli doontaa jacaylka runta ah sida in. Sidaas go'aanka waa inaad la. Ma rabtaa in qof ama mid aad u?